Nampiaka-peo ireo minisitry ny Ankolafy Ravalomanana – MyDago.com aime Madagascar
Nampiaka-peo ireo minisitry ny Ankolafy Ravalomanana
Niteraka resabe tato ato ny tsy fitovian’ny volavolan-dalàna momba ny famontsoran-keloka teny anivon’ny governemanta sy ny parlemantera. Ho an’ny Ankolafy Ravalomanana, nahitana ny Praiminisitra lefitra misahana ny toekarena sy Indostria Botozaza Pierrot, ny minisitry ny fambolena Ravatomanga Roland, ny minisitry ny fiompiana Randriamandrato Ihanta, Ankolafy Ravalomanana dia nitondra fanazavana tamin’ny mpanao gazety izy ireo omaly. Ny volavolan-dalàna momba ny famontsoran-keloka, hoy Botozaza Pierrot, dia efa misy ny fandaminana teo anivon’ny governemanta. Mandalo ao amin’ny “comité ad’hoc” izy io izay vao mandeha eo anivon’ny filankevitry ny governemanta. Tato ho ato, hoy izy, dia tsy manaraka ny “procedure” izy io fa nilatsaka avy amin’ny minisitra tomponandraikitra ary nandalo filankevitry ny governemanta. Efa maromaro ny fanakianana nataonay tamin’izy io, hoy hatrany ny fanazavana.Nisy ny fandraisan’anjaran’ny governemanta ho fanatsarana io volavolan-dalànaio, satria na faingo aza dia miova ny dikany. Ny nahagaga dia rehefa tonga tany amin’ny parlemantera dia niova Ilay izy. Tsy tokony “ratification” no atao amin’iny volavolan-dalàna momba ny famontsoran-keloka iny, fa “examen de dossier”. Ny famontsoran-keloka, hoy Botozaza, dia misy ifandraisany amin’ny fampihavanam-pirenena. Tokony atao io fa tsy misy omena sy tsy omena. Ny fampihavanam-pirenena,hoy izy, dia ahafahana irosoana amin’ny fifidianana. Aoka hihavana tsyhisy fandrimpandrika any ambadika. Tsy nisy tsy nanota teto amin’ny firenena, hoy ity Praiminisitra lefitra misahana ny toe-karena sy indostria ity, ka tokony hihavana fa izay tsy tia an’izay dia fahavalom-pirenena. Nanamafy kosa izy ireo fa miombon-kevitra amin’ny filohan’ny CT Rakotoarivelo Mamy, ny amin’ny fialana ao anatin’ny rafitra raha toa ka tsy mifanaraka amin’ny Ankolafy Ravalomanana ny toe-daraharaha. Mikasika ny Filoha Ravalomanana dia aoka ho fantantsika ,hoy Ravatomanga Roland, fa ny sarintsary mpanamelohina dia izy tompony aza tsy mahafantatra fa meloka. Matoa tsy nampafantatra azy dia ianao mpanao lalàna aza tsy matoky. Misy fomba maro, hoy ity mpanao politika ity, no ampahafantarana azy izany, toy ny masoivoho Malagasy any an-toerana sns. Noho izany tsy mila famontsoran-keloka ny Filoha Ravalomanana.
Nifamory ny Ct sy CST Ankolafy Ravalomanana !
Auteur Solo Razafy*Publié le 7 avril 2012 7 avril 2012 Catégories Politique
11 pensées sur “Nampiaka-peo ireo minisitry ny Ankolafy Ravalomanana”
7 avril 2012 à 7 h 22 min
Matoky an’ireto ve ianareo ???
ary MITADY ny mety ho mpamadika ao @ Ankolafy Ravalomanana ?
Tandremo ny bibilava, sy ny saka mainty, fa tsy misy mahafantatra ny fotoana HANAIKERANY.
Tsy Praiminisitra sy Minisitra foana ireo raha tsy ao raha, ka MITANDREMA
Ravatomanga-Botozaza- Ihanta : frantsy moa ireo sa malagasy MITONDRA NATIONALITE VAZAHA ?
Iza fatra-panenika sy izay miahiahy dia tsy mandry fisainana..ary mamosavy ny fiaraha-monina…
Avelao hiasa ny olona ary ny bainga voavadika no hitsarana azy fa tsy ety an-dalana izy ireo no « endrikendrehina » toa dia efa tena matsilo ery ny fijerin’ireto mananjika..
Izay miasa ihany no maloto tanana..!
Raha « madio saina sy eritrerotra » ireto mpamalan-kira dia tokony hiditra an-tsehatra !
7 avril 2012 à 12 h 21 min
Very saina , fanina ary jambena tsy mahita izay ifaharana i rajoelina izay zatra nisotro ny rano maloto feno hevitra maloto nomen’i tsirahonana azy mba hisokafan’ny sainy !
Nisotro dia nisotro ireo toto-hevitra i rajoelina..
Maty i tsirahonana ,tapitra teo ny zava-pisotro manome saina
Ny finoanoam-poana ny olona foka sy jiolahy ary nahay nandresy lahatra ny kely fisaina
dia nahavitana loza amin ‘atambo eo amin’ny mpiara-monina !
Firy moa ireo ,toa an-drajoelina , no nanaraka sy niaiky an’i tsirahonana , ary nisotro maloto »voa hasin’i zanakolona – potion magique-? »ka nanosika ireo olona tsy valahara nandoro trano sy ny mpiasa tao anatin’ireny trano ireny ?
Fahasoavana ho an’ny Malagasy izao seho-javatra izao !
» RY MALAGASY HAVANA ! MISAORA AN’I JEHOVAHA AMIN’NY FONAO RAHETRA , AMIN’NY SAINAO REHETRA , AMIN’NY FANAHINA REHETRA ! AZA MISY ADINOANA NY FITAHIANY REHERA ! »
Isika Malagasy dia tsy miady amam-paty..fa eo anoloan’izao fahasahiranana be iainan’ny Malagasy izao dia mihatsaraivelnitsihy raha toa ka tsy miteny ny voka-dratsin’ny aeasa ,ny fihetsika ara-paolitika , araka ny fampiarana ny lalàna izay noheverina fa hainy ,ara-pisainana satria latsaka tao an-dohany fa anisan ‘ireo avara-pi izy ka tsy mety diso.., ary mahefa noho ny Malagasy hafa izay « tsy manana diplaoma na nandranto fianarana toa azy! »
Tsy anjarako ny mitsara ny maha -kristianina azy !
Fa raha ny maha-malagasy azy kosa dia iaraha-mahalala sy iaraha -iainana sy iaraha-mahatsapaisan’andro fa ny fanahy no maha olona ,koa tsy tokony izahozaho sy mieboebo , mihevotrevitra..eo amin’ny mpiara-monina !
Nanao hetsika nahavao fady ity rabevomanga ity teo amin’ny fiainam-bahoaka : tsy nihetsika ny Vahoaka fa nigonongonona hoe : ‘Andriamanitra tsy andrin ‘itony , andrinay ! ».
Dia nanesika tsy nahalala voky , niedinedina nihevitra tsy ho tratry ny aloka ,kay tojon’ny aloka akoho !
Asa raha mba ho tonga saina ireo misotro ny rano maloto feno poizina naroson’ity rabevomanga ireo » miseho ho mpitondra tsy refesi-mandidy..ka tsy matahotra alahelo-bahoaka izay miavosa !
Hisy fihekentrany eo amin’ny fihetsiky rajoelina ny banga avelan’ity mapanoro hevitra tsy mifandraika na kely aa amin’ny tombotsoan’ny Firenena sy ny Vahoaka.
Izay nolazain’ity lasa ko-razana maboly vomanga ity dia noheverin-drajoelmina ho fenitra sy filamatra..!
Efa ela -telo-taona izao – no maty ,very hasina ny Firenena ary mihinanany tsy tokony ho hanina ny Malagasy roa-polo tapitrasa ,
koa ny fahafatesan’ity rabevomanga ity dia tsy hisy fitserana na tomany eo amin’ny Vahoaka..!
Azoko tsara raha misy olona marobe faly sy mandihy ,tsy noho ny faty fa
noho ny fahaverezan-tsaina sy ny sangodi-panina miantefa amin’ny rajoelina ,koa raha te -hanararao-paty ny Vahoaka dia tsy misy hisakana izany !
KOA ATOSEO RAJOELINA HITROSONA SY HITSIRARA..AMIN’NY TANY !
MASINA ITY TANY ITY KOA AZA MANAO RATSY AMIN’NY MPONINA MIAINA AO AMINY !
7 avril 2012 à 13 h 40 min
diniho tsara ny zavatra teneniny LEMENA vao mitsikera ny FOZA ohatrany ielahy dia ny manasarotra no fantatrareo ka any MADAGATE no anorato fa any mitovy aminielahy
9 avril 2012 à 9 h 13 min
le Grand Projet de la Gouvernance HAT :
Exploitation du Lac ANOSY et le marais MASAY
Bravo la HAT, nous sommes dans la bonne voie : la population peut crever autant qu’elle veut, nous n’avons rien à….. Les gasy ne sont que des andevo des vazaha (citation du vazaha dans l’avion)
Visons d’abord L’APPARENCE ECLATANTE qui fera croire que nous travaillons !!! 🙁
9 avril 2012 à 9 h 14 min
…..que nous travaillons pour les pauvres……bien sur !
10 avril 2012 à 9 h 02 min
10 avril 2012 à 13 h 56 min
Miandry ny Hambopon’nareo izay ary hiala fa aza mihatsara ivelan-tsihy eo fotsiny e.
I Botozaza ve dia hiala eo na hisy lanitra hilatsaka aza eo,
Fa ny zavatra marina mba nolazain’ny zareo aloha, dia tsy voakitika ny Amnistia i De8. satria tsapandry zareo ihany hoe nanao crime contre l’humanite, ary gasy mitovy aminy ihany, fa na ny Sud Af aza amin’izao dia efa tena convaincu fa mpamono olona lery, satria dia mbola nampamono olona indray taty aoriana ary tena nisy preuve mihintsy ary efa manao enquete mihintsy ny gvt sud af sy ny Sadc amin’izao. Ka ny tena ahiako dia hosamborin’ny Sud af lery ary direct an Nosy lava, raha tsy ho hataon’ny sudaf chaise electrique.
10 avril 2012 à 23 h 52 min
Ny ahiahy tsy hiavanana fa aza dia asiana mafy Lemena e!!
marina ny azy fa efa rė teto fa Ravatomanga dia efa NAMADIKA
i Botozaza moa dia tsy hay tsy hay ???
i Madama ihanta????ahoana no hanaikeny ny fazahoana manonfdrana ny OMBINTSIKA nefa zavatra efa nofoanana
aza izany fa efa fantatra ny antony dia fantatra koa ny olona afaka manondrana izany sy ny fiatraikany @’ireo mpiompy
fa MIRONGATRA ny DAHALO, omby ?isika irery no manana ireny koa no ahondrana VELONA????efa fanntatra koa fa
azon’ireo hatao tsara ny manisika VATOSOA ohatra any @ kibon’ny omby any sns.Misy antony ao matoa ny olona miteny,
fa anjarany kosa no manaporofo @ asa raha sanatria ka misy ny fanaratsiana azy na ahiahy hapetraky ny olona.
Ny mampanahy ahy eto dia efa MISY VE PAIKA ADY HANOLOANA ilay FIALANA @ ‘io FITONDRANA io???sa vao maika
hanome VAHANA sy HAMPITARAZOKA ny ANDROn’FOZA EO @ ‘ ilay sezany?????Dia hisintaka izany ny ankolafy dia
HIANTONA EO NY FAHATONGAVAN’i DADA sa ahoana no PAIKA ??HIALA!HIALA!!!tsy efa tara loatra ve?????sao dia
mba ……….tsy haiko aloha ?????
11 avril 2012 à 14 h 04 min
Mbola ho fanamafisana dia ny ministera mandeha @’izao fotoana izao dia ireo
ministera SAHANIN’i ankolafy RAVALO koa io koa tsy ahafaly ny rehetra dia ho
ZARANY AZA HIALA AO DAHOLO aloha fa ireo anie tsy mivaky loha na mandeha io na tsia e!!IHINANA no
halehany eo fa tsy hanao inona akory na hanasoa ny FIRENENA, dia jereo fa efa MITANATANA vava ny sasany
haka ilay toerana dia hitohy hatrany ny fanjakan’ny baroa.
Ny tiako hatongavana dia EFA TARA LOATRA raha izao vao hiala!!tokony vao tsy nahaomby ny fiavian’i dada dia
tokony efa NIALA MADIODIO e! izao efa tara loatra!!ny fotoana mandeha izy MIDONGIZINA HATRANY FA NAHAZO
izay TADIAVINY.Tsy haiko e!!raha misy tetika hafa kosa aloha dia tsy mifaka aho fa raha mbola tsy misy????????
Ny ahiko raha hiala ny ankolafy ra8 dia hiditra indray ny ankolafy Zafy dia eto ndray sika ny fikan’ny foza nie dia tsotra ihany taritina ihany ny tetezamita nadia 10 taona aza raha tsy misy manao hetsika goavana dia taritina foana io ka zay tsy mahatanty mosary dia miditra koa miditra mivoaka ihany ny ady eo zay voky dia mangina aiza ary reto olona reto @zao ary inona ny hetsika ataony (Vy vato,yves aimé,raharinaivo,alain andriamiseza,dr hery) nafanafo tato ihany reo fa rehefa voky dia mangina NY VAHOAKA KOSA DIA FITAOVANA AKANA SEZA IHANY
Précédent Article précédent : Parlemantera Ankolafy Ravalomanana : mampaneno lakolosy amin’ny SADC
Suivant Article suivant : An-tsary Magro 07 Avril 12